Auto nhicha Products Suppliers & Factory - China Auto nhicha Products Manufacturers
Auto Wiper Mmezi Ngwá Ọrụ 0031
Wiper repairer wiper roba warara repairer wiper restorer 0031SBT
Mmezi ngwa ngwa: mmezi ike na-enweghị akara, na-agbatị ndụ nke wiper agụba ma chekwaa ụgwọ.
Ugboro abụọ mmezi: Ọ bụrụ na igwe nhicha ahụ dị oke ike, buru ụzọ mezie ya na aja na-adịghị mma, wee jiri ezigbo ájá rụzie ya nke ọma. Ọ bụrụ na elu nke wiper dị ọkụ, jiri naanị ájá dị mma iji rụzie ire ụtọ. Usoro nrụzi abụọ, nhichapụ wiper dị nwayọ ma rụzie Nkọwa zuru ezu.
Car polishing na ịme waksị Machine 2908
Car polishing igwe, ụgbọ ala ọkọ idozi idozi na polishing igwe ụgbọ ala mma igwe, ụgbọ ala odori ma ọ bụ Lithium batrị 2908SBT
Multi-function: scratgbọ ala ọkọlọtọ na-arụzi ụgbọala nwere ike imezi nsị nke akwa na-enwu gbaa nke agba ụgbọ ala, wepụ obere mgbawa na agba ụgbọ ala, wepụ ihe nkiri mmanụ na iko ahụ, ma ghaa ma rụkwaa ọkụ ụgbọ ala edo edo.
Mgbanwe ọsọ: nnukwu torque, na-agbazi ọsọ, 0-8500 rpm mgbanwe na-agba, elekere mgbanwe nke ọsọ.
Idozi isi dochie: a na-ejizi ihe ndị eji arụ ụgbọ ala dochie anya ya, a na-eji isi edozi maka isi na-eme ka ọ dị mma, a na-eji isi edozi ajị anụ na-achacha enyo, a na-ejikwa isi ájá na-edozi ya nke ọma.